[Aprili·Freesia] Uyilo loncwadi nobugcisa ngasechibini eliluhlaza/ibhedi enkulu ekhululekileyo/indawo yokudubula yosaziwayo/umboniso omkhulu/umnyango weYunnan University/Culture Lane Food
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguVLc
Le yindlu endala esembindini wedolophu.Igumbi lineebhalkhoni ezimbini ezimhlophe ngaphambili nangasemva, ezityalwe iintyatyambo nezityalo, ezishushu kwaye zikhululekile. Igumbi lixhotyiswe nge-XGIMI's 120-intshi enkulu yescreen projection kunye neHarman Kardon Bluetooth speaker.Obona bomi butofotofo ukungqengqa esofeni ubukele imuvi. Unokufunda incwadi, uphulaphule ingoma, usele iti egumbini, okanye uye kwibalcony uvule ifestile ukuze ujonge umthi omkhulu ongaphandle kwefestile kunye noonomatse abancinci bedlala emthini. I-pantry ibonelela ngamanzi emithombo yentaba yasimahla, iti, iti enevumba elimnandi kunye nekofu, ezinokuthi iindwendwe ziyonwabele ngexesha lokuhlala kwazo. Igumbi lokuhlambela libonelela ngamanzi ashushu ubusuku nemini, kunye nezinto ezifunekayo zemihla ngemihla ezikhethwe ngokucokisekileyo ngam, kunye neepads zomqhaphu kunye ne-cotton swabs, ukunika inkonzo enomdla kakhulu. Apha, ungonwabela ubomi obukumgangatho ophezulu.
Yabelana ngobomi esibuthandayo
Ukuchitha ixesha kwikhaya elimangalisayo ...
Ndiyathanda ukuhamba Ndithanda ukufota Ndithanda umculo kunye neentyatyambo
Ndiyayithanda indlu endala enesitayile. Indawo yokuhlala ehlaziyiweyo imhlophe ubukhulu becala. Igumbi ligcwele ukukhanya kwelanga kwaye lityalwe iintyatyambo kunye nezityalo. Lishushu kwaye likhululekile. Ikwakuvumela ukuba uthathe iifoto ezintle...
Kukho iibhalcony ezimbini ezimhlophe apha ngaphambili nangasemva kwendlu yam.Ilanga liqaqambile phantsi kwaye lifudumeza neqhiya.Ndithanda ukungqengqa esitulweni ndivumele ilanga lihlale liqaqambile ngalo lonke ixesha, ndonqena ukufunda iincwadi nokumamela umculo. ..
Kwakusasa, ulele ebhedini, unokuva isandi seentaka, kwaye xa uvula amakhethini, unokubona imithi emikhulu eluhlaza, udibanise kunye nabathandekayo bakho, kwaye ujabulele ixesha elizolileyo nelimnandi le-fireworks. kulo mhlaba...
Ukuhlala apha kuphefumla umoya wobuvila kwaye ucinga ubomi obukhululekileyo Ngaba uyayithanda le mvakalelo...
Indawo ezingqongileyo: Ukuhamba ecaleni kwendlela yiSitrato saseWenlin esaziwayo eKunming, apho abantu abavela kwihlabathi liphela bahlangana khona, kukho iikhefi ezikhethekileyo kunye nemivalo, iivenkile ezahlukeneyo zokuyila kunye neegalari. Landela uMnumzana Po ukuze wehle uye eCuihu Park. Emva kwemini, uthatha imifanekiso, uhamba, kwaye usele ikofu, umoya uzele bubuvila. I-Culture Alley esezantsi ineentlobo ngeentlobo zokutya okukhethekileyo kweYunnan, kunye nezitya zaseJapan, zaseIndiya naseMexico. Iivenkile zeziqhamo, iivenkile zeentyatyambo, iivenkile zeencwadi ezizimeleyo, kunye nabalungisi beenwele banayo yonke into. Iiteksi zokuhamba kunye nokutya kwasebusuku kakhulu azikhululeki. Emnyango yikhampasi yakudala yeYunivesithi yaseYunnan, apho unokuhamba ngokuzolileyo phantsi komthi weginkgo wenkulungwane ubudala kwaye usondele kumamatse amancinci amnandi emthini. Ngaphesheya kwesitrato kukho indawo eyayisakuba yiYunivesithi yaseSouthwest Associated. Ngena kwaye undwendwele izakhiwo zakudala ezigciniweyo, vumela ixesha libuyele emva kwaye ube nohambo olungathandekiyo loncwadi kunye nobugcisa.
IYunivesithi yaseYunnan: Isango
Ipaki yaseCuihu, iHolo yeNtetho yoMkhosi: imizuzu emi-5 ngeenyawo
I-Yuantongshan Zoo, ukujonga iintyatyambo zecherry, iTempile yaseYuantong: imizuzu eli-10 ngeenyawo
Jinmafang, Nanping Pedestrian Street: 10 imizuzu ngeteksi
Isitalato saseQianwang kunye neNanqiang Street: imizuzu eyi-10 ngeteksi
IDianchi Lake, Xishan Forest Park, Yunnan Nationalities Village, Yunnan Provincial Museum, Guandu Ancient Town, Dounan Flower Market, Park 1903 Federal Dream Theme Park, Ancient Dian Country Resort
Idolophu eNtsha yaseChenggong, iStone Forest Scenic Area, iJiuxiang Scenic Area, iAnning Spring Spring, iMaitreya eHot Spring
Umbuki zindwendwe ngu- VLc
Ungandibonisa iindawo zokutyela zokwenyani, iindawo zokutyela ezimnandi nezimnandi ezikufutshane.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kunming